Inombolo kamazisi yemoto. Inombolo yokuhlonza imoto iyikhodi
ⓘ Inombolo kamazisi yemoto. Inombolo yokuhlonza imoto iyikhodi ehlukile, kufaka phakathi inombolo ye-serial, esetshenziswa ngumkhakha wezimoto ukukhomba izimoto n ..
ⓘ Inombolo kamazisi yemoto
Inombolo yokuhlonza imoto iyikhodi ehlukile, kufaka phakathi inombolo ye-serial, esetshenziswa ngumkhakha wezimoto ukukhomba izimoto ngazinye, izimoto ezihuduliwe, izithuthuthu, izithuthuthu kanye ne-mopeed, njengoba kuchazwe ku-ISO 3779 naku-ISO 4030.
Ama-VIN asetshenziswa okokuqala ngo-1954 e-United States. Bekudinga ukuthi zonke izimoto ezisendleleni zithengiswe ukuthi zibe ne-VIN enezinhlamvu eziyi-17, ezingafaki izinhlamvu O o, I i, no-q ukugwema ukudideka ngezinombolo 0, 1, no-9.
Wikipedia: Inombolo kamazisi yemoto